काठमाडौं । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमति विपरीतको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेकै दिन डा. केसी १६ अनशन बस्ने भएका छन् ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेपछि केसीले अनसनको तयारी गरेका हुन् । उनले बुधबार अपराह्न ४ः३० बजे इलाममा पत्रकार सम्मेलन गरेर अनशन सुरु गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
केसीले इलाम नगरपालिकाको फुलगाछीमा रहेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको पुरानो भवनमा अनसनको तयारी गरेका छन् ।
समितिले बहुमतले पारित गरेको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले फरक मत राखेको छ । काँग्रेसले डा. केसीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै फरक मत राखेको हो ।
२३ सदस्यीय समितिमा नेकपाका १५, कांग्रेसका ६ र राजपाका २ जना सांसद छन् । कांग्रेस सांसद्‍ गगन थापाले समितिको बैठकमा सरकारले डा. केसीसँग सम्झौता गरी धोका दिएको बताउँदै फरक मत राखेका थिए ।
उनको फरक मतसहित समितिमा रहेका सदस्यको बहुमतले उप–समितिबाट समितिमा पेश गरिएको विधेयक सामान्य छलफल गरी पारित गरेका थिए।
बैठकमा समिति सदस्य एवं नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले सम्झौता अनुसार विधेयक पारित गरिएको दाबी गरेका छन्।
साढे ५ लाख नगदसहित मण्डेकाजीलाई सम्मान
भक्तपुर । कराँते खेलाडी मण्डेकाजी श्रेष्ठलाई मध्यपुर नगरपालिकाले साढे पाँच लाख नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ ।